Soosaarayaasha Timaha Saameeya ee Aadanaha | Fayuan
Qalabka timaha bini-aadamka ugu fiican ee soosaarayaasha fayuan
Timaha Aadamiga ee Bini'aadamka
Timaha Aadanaha Malaysia
Timaha Aadanaha ee Brazil
Timaha Aadanaha Hindida
Timaha Aadanaha ee Peruvian
Lace Wig buuxa
Soosaarayaasha Timo-Gaarka ah ee Aadanaha
Waxaan leenahay alaab tayo sare leh oo naga dhigaysa mid ka mid ah shirkadda timaha aadanaha ugu fiican, alaabadayadu waa kuwa caan ka ah adduunka oo dhan laga bilaabo Brazil, India, Vetnam ilaa Frace, Africa ilaa USA iyo hal shirkad oo ugu fiican Shiinaha.
Wareerka Dabiiciga ee ugu Fiican
Labalaab oo la sameeyay, gogosha tolidda 100 garaam halkii xirmo
Timaha Dhabarka ah ee Tooska ah ee Tooska ah
Miisaaniyadda 400 oo Gram, Sample Order aqbalo, Waqtiga Gaarsiinta 2-3 Maalmaha Ganacsiga
Timaha Aadanaha toosan
Waxaan ku takhasustay timaha Braziil, Timaha Peruvian, timaha Malayshiya, Timaha Hindida, Timaha Timaha iyo Xiritaanka Timaha.
Udambaysiga timaha u eg ee loo yaqaan 'Lace Frontal Wig'
Fasalka Timaha 12A, Midabada Timaha Midabka Dabiiciga ah, Dhererka Timaha 12-30 inji. 100% madaxa timaha curyaaminta timaha waa jilicsan, waara oo qiimo u leh iibsashada, taas oo ku habboon bilawga iyo timo-jaraha. Fasalka Timaha 7A, 8A, 9A iyo 10A (Double Drawn) ayaa la Heli karaa. Midabada Timaha Dhamaan Midabada Dabiiciga ah (Iyadoo Aan La Dhaqangelin Midabaynta), Midabada Madoow, Midabada iftiinka, Midabada Ombre. Dhererka Timaha 8 ”~ 30". Miisaan 100G = 3.5OZ Halkii Xidhmo ama Aasaasid. Amarka Muunad ee la Aqbalay, MOQ waa 1 Xidhmo (100G). Waqtiga Gaarsiinta 24 Saacadood gudahooda haddii ay kaydsan yihiin, 5 ~ 7 maalmood haddii la Sameeyay. Waqtiga Maraakiibta Guud ahaan Hadalka, 3-5 Maalmaha Shaqada. Bixinta Lacag Bixinta, Western Union, T / T, Escrow, Gram Money, iwm. Qiimo Jaban oo Loogu Talagalay. Lacag celin Isweydaarsiga $ $> waa la heli karaa. &
Tuur Shixnad Adeeg
Ku dhufo korka timaha timaha si aad xididdada timaha u nadiifiso una adkeeyso si isdaba joog ah. tolo timaha kore ee timaha xidhmooyinku waxay gaarayaan timo weft.sew timo jajab ah iyo xiritaan ama wejiga hore garka. maydh timaha, ka saar saliida timaha iyo boodhka, nadiifi timaha been abuurka ah, timaha ka dhig mid jilicsan oo jilicsan. u qaabee timaha sidii loogu baahnaa, iyo hagaajinta qaababka si timaha loo sameeyo timo dheer. Waxaan u istcimaalay fedex AMA DHL express in la dhoofinayo isla markaana seddex ilaa toddobo maalmood oo shaqo gudahood waxaad ka heli doontaa amarkaaga albaabkaaga.
Dhoofinta dhoofinta dhoofinta, MOQ waa hal gabal.
Doon markii la helo lacagta oo dhan.
Macaamiisha magaceeda, cinwaanka iyo nambarka taleefanka ayaa loo adeegsan karaa sida dhoofinta macluumaadka.
Ku daabici kartaa sumadda sumadda fudud oo ku dhejin kartaa xirmada.
Kusoo dhowaada heer cayiman bil kasta ama toddobaad kasta, hel qiima dhimis ama dhoofis bilaash ah amarada qaar.
Waxay siin karaan macaamiishaada hadiyad yar (3D mink eyelash indhaha).
Dabayl Timaha dhabta ah ee Timaha Madow
Iyadoo la horumarinayo heerarka nolosha dadka, wigyadu si tartiib tartiib ah ayey u soo galeen nolosha dadka waxayna si tartiib tartiib ah ugu noqdeen qasab inay ku shaqeeyaan fashionistas. Fayuan timaha, oo ah nooc wig ah oo dharka xayawaanka ah, wuxuu bixiyaa timo toosan oo timo madow ah. Wigs waa mid aad u balaadhan, oo ku habboon ragga, haweenka iyo carruurta si isku mid ah. Dhammaan dadka jecel quruxda way ku habboon yihiin. Timaha waxay door muhiim ah ka ciyaaraan muuqaalka guud ee qofka. Hababka timaha waxay u muuqdaan wax fiican wax walba. Sida iska cad, qaabka timaha kuu habboon ayaa aad muhiim u ah. Cirbadaha timaha ee dhabta ah ee timaha madow ee uu sameeyo Fayuan Timo waa timaha madow ee u muuqda kuwa dhab ah. Waxay dareemeysaa mid jilicsan oo jilicsan taabashada, timuhu waa cusub yihiin oo xarrago leh, jilitaanku wuu sarreeyaa, sidoo kale waa loo dhajin karaa waana loo qurxin karaa doonista, sidoo kale waa mid aad u habboon in la daryeelo.
Curly Wig with Curly Bang For Fayuan Timo
Timaha Fayuan waa xirfadle soo saareyaasha timaha bini aadamka. The googooyo cirif leh ee uu sameeyo Fayuan Timo kaliya ma bedelin sawirkayaga, laakiin wuxuu kaloo keenay kalsooni badan iyo suurtogal nolosheena ah. Sababtoo ah dumarka jecel quruxda, suuxinta timaha aadanaha waa kuwo aad wax ku ool u ah nolosha. Waad heli kartaa timaha aad rabto adigoon gooyn timahaaga ama aadan waqti badan ku lumin. U dhig sida gadhka weyn ee loo yaqaan 'wigs', dumarka qaarkood oo timo gaagaaban mararka qaarkood waxay rabaan inay beddelaan timaha, timaha cirifka weyn waa xulasho wanaagsan. Maalmahan, curdinka curdinka leh leh curly bang wuxuu noqday qalab xayeysiis ah, xirashada waxay muujin kartaa soo jiidashada shakhsiyadda. Xullo shaashadda timaha ee Fayuan tufaax leh adoo isku dar ah si aad naftaada ugu daro qaab aan caadi ahayn oo qurux badan.
Dabayl gaagaaban oo gaagaaban oo loogu talagalay timaha Fayuan
gorgorka gaagaaban waa timo macaan, oo badankood dadka siiya dareen wanaagsan oo nadiif ah. Haddii aad rabto inaad ka dhigto timahaaga gaaban inay u muuqdaan kuwo qurux badan oo qurux badan, iskuday mugga timaha gaagaaban ee timaha dadka. Dharka timaha Fayuan ee dharka cufan ayaa leh midabyo qurux badan oo dabiici u ah inay xidhaan, iyagoo siinaya dareen kalsooni iyo karti leh. Intaas waxaa sii dheer, saameynta guntimaha jeexjeexyada gaaban waa mid macquul ah, mana jiraan wax ciriiri ah oo lagu hayo wigs. Fayuan Timo wuxuu muddo 21 sano ah ku howlanaa wax soosaarka timaha bini-aadamka muddo 21 sano ah wuxuuna qibrad wanaagsan u leeyahay horumarka wig iyo cilmi baarista. Ballanqaadee tayada wig kasta, wig-gaan gaagaaban ayaa laga reebayaa. Xullo timaha Fayuan, samee wigs-ga aadamaha aadanaha, sida shaydaan gaagaaban oo gaagaaban oo macquul ah oo dabiici ah, markaa waad xidhan kartaa walaac la'aan.
Garabka Aadanaha Madow ee Timaha Fayuan
Saqafka bini-aadanka madow wuxuu aad ugu jecel yahay dumarka. Haweenka intooda ugu badan waxay xirtaan gadhka timaha bini-aadamka madow ee dhaadheer si ay uga dhigaan kuwo aad u qurux badan kana yar. Timaha Fayuan ee dheer ee garabka bini aadamka ee madow waxaa loo yaqaan 'divatress curly wigs', saameyntiisuna waa mid macquul ah, mid fudud oo raaxo leh. Soojiidashada gaarka ah ee saqafka bini-aadamka dheer ee bini-aadamka way adag tahay in la iska caabbiyo. Xiro oo aan kuu oggolaano inaad isla markiiba u beddeleyso marwo qurux badan oo qurux badan. Dumar badan ayaa dareema kadib markay xiraan timaha fayuan's divatress curly wigs, inay umuuqato mid macaan badan oo kacsan, xaalada guud ahaaneedna aad ayey u fiicnaatay. Waad heli kartaa.
Waxaan nahay fayuan shirkada timaha bini aadamka ee saldhigeedu yahay Guangzhou ee China 11-kii sano ee la soo dhaafay waxaanan soo saareynaa howlo warshadeysan oo timaha dabiiciga ah ee bini aadamka iyo badeecadaha laga sameeyay timaha bini aadamka sida Qalabka Timaha Aadanaha iyo Mashiinka Weftka, Xirmooyinka, wejiga hore, fidinta, iyo Timaha cufan ee garka dhererka ah ee shaashadda garabka hore
Waxaan leenahay badeecado tayo sare leh oo naga dhigaya mid ka mid ah shirkadda timaha aadanaha ugu fiican waxsoosaarkayagu waa caan adduunka oo dhan laga bilaabo Brazil, india, vetnam ilaa France, Africa ilaa USA waxaan nahay hal shirkad oo ugu wanaagsan Shiinaha.
Ujeeddadeena ayaa ah inaan ka dhigno macaamiisheenna kuwo ku fiican ganacsigaan waana sababtaas darteed waxaan u daryeelnaa tayadeena iyo socodsiinteena, marka hubi inaad ganacsi la sameyneyso shirkadeena inaad heleyso 100% ugu wanaagsan timaha bini aadamka iyo tayada ugu fiican, taasi waa waxa shirkadeena loo yaqaan.
Waxaan dammaanad ka qaadaynaa alaabadayada MA AHAN TILMAAMAHA iyo nolosha timaha waa ilaa inta ay sii haynayaan